कक्षा १२ मा ४० नम्बरका लागि अनलाइन परीक्षा ! » बुद्ध भूमि नेपाल
Home/समाचार/कक्षा १२ मा ४० नम्बरका लागि अनलाइन परीक्षा !
कक्षा १२ मा ४० नम्बरका लागि अनलाइन परीक्षा !
कक्षा १० र ११ को परीक्षालाई कानुनी संरचना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गराउने तयारी भइरहेका बेला यस वर्षको कोरोना महामारीका कारण स्वतः आन्तरिक मूल्याङ्कनमा गएको छ भने आगामी वर्षदेखिको व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध हुने तयारी छ । संविधानतः माध्यमिक शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा छ भने त्यसअनुसारको परीक्षा संयन्त्र स्थापनाका ढिलाइ हुँदै आएको छ । अनलाइनखबर बाट
५ आश्विन २०७७, सोमबार १७:३०